ဖြူ စင်သောစိတ်ကလေး: ကြိုတင်သိမြင်နိုင်တဲ့ အကြောက်တရား နဲ့ ကြိုတင်မမြင်နိုင်တဲ့ အကြောက်တရား
ရင်ငြိမ်းသူ9March 2014 at 20:55
တဂ်ပို့စ်လေး ဖတ်သွားခဲ့တယ် မမဆွေလေး ...
Ma Tint9March 2014 at 20:56
ကျန်းမာရေးအရ အားအင်ချိနဲ့နေတဲ့အခါမျိုး ကံနိမ့်နေတဲ့အခါမျိုးမှာ ဖြစ်တတ်တာမျိုးပေါ့ မွန်လေးရေ...
အိပ်မက်လိုလို အပြင်မှာ တကယ်ဖြစ်သလိုလိုမျိုး ခံစားရတယ်။ ကြုံဘူးတော့ သိနေတယ်လေ :)
တဂ်ပို့စ်လေးကို ကြည်နူးစွာဖတ်သွားတယ် ...
rose of sharon9March 2014 at 21:05
အစပိုင်းဖတ်ပြီးကြက်သီးတွေထသွားတယ်... အမကသတ္တိသိပ်ကောင်းတာ :D
မိုးညချမ်း9March 2014 at 21:06
တဂ်ပိုစ့်လေးကို ဆွဲဆောင်မှုအားကောင်းကောင်းနဲ့ ရေးသွားတာ အားကျမိပါတယ် … :)
ဏီလင်းညို9March 2014 at 22:32
တက်ဂ်ပို့စ်လေး ကိုဏီ ဖတ်သွားတယ်...။
အိပ်မက်ကို သရုပ်ဖော်တာ ပီပြင်တယ်...။
မရို့စ် ကြောက်မယ်ဆိုရင် ကြောက်စရာ..... :D
မြသွေးနီ9March 2014 at 23:43
လန့်နိုးချိန်မှာ ချွေးတွေပျံပြီး အာခေါင်တွေ ခြောက်သွေ့လို့ရယ်..။
အဲ့ဒီလို အိပ်မက်မျိုးတော့ မမက်ချင်ဘူးရယ်..။
အမေတို့ကတော့ အဲ့လိုအိပ်မက်တွေ မက်လို့ လန့်နိုးလာရင် ဘုရားသောက်တော်ရေနဲ့ ဖြန်းပြီး ဘုရားစာရွတ်ပေးတာ မှတ်မိသေးတယ်။.
စံပယ်ချို 10 March 2014 at 05:04
တကယ်ကို အိပ်မက်ဆိုးပါပဲ မက်ပြီးသား အိပ်မက်လေးကို မြင်သာအောင်ဖော်ပြတတ်တယ်
နှင်းနဲ့မာယာ 10 March 2014 at 07:19
ညီမလေး အဲလိုအိပ်မက်မျိုးတွေ ခဏခဏ မက်ဖူးတယ်.. နိုးတဝက် အိပ်တဝက် အဖြစ်တွေနဲ့လဲ ကြုံဘူးပါတယ်.. မကြောက်ဘူးလို့ အားတင်းထားတဲ့ကြားက လက်တွေ့ကြုံလာရင် လိပ်ပြာလွင့်မတတ်ကြောက်တာ မဆန်းပါဘူး...
ဟန်ကြည် 10 March 2014 at 07:46
အပီအပြင်နဲ့ ကျကျနနကို ရေးထားတာကိုးဗျ...ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်းနဲ့ အချိန်နီးမှ ဇွတ်အတင်းတွန်းရေးလိုက်ရတဲ့ ကိုယ့်ပို့စ်ကလေးကို ပြန်တွေးရင်း မျက်နှာတောင် ငယ်မိပါလေရော...
blackroze 11 March 2014 at 09:14
မြတ်ပန်းနွယ် (Myat Pan Nwe) 12 March 2014 at 17:53
အိပ်မက်ဆိုးကို သရုပ်ဖော်ပြထားတာ ပီပြလိုက်တာရှင်။
ခိုင်လေး ( ရွှေတောင် ) 13 March 2014 at 20:21
အိပ်မက်လေးကို ရေးဖွဲ့ထားပုံလေးက အရမ်းပီပြင်လွန်းတော့
ဖတ်နေရင်း ကြက်သီးတွေတောင်ထမိတယ် ။ လေးစား အားကျ
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! 14 March 2014 at 12:38
သူများတွေရဲ့ ရေးနိုင်အားကို အားကျလိုက်တာနော်... :)